Ndị Sadusii na akụkọ ifo - Rabbi Michael Avraham
Ndị Sadusii na akụkọ ifo
Nzaghachi > Atiri: Okwukwe > Ndị Sadusii na akụkọ ifo
Ndewo Josef Ajụrụ ya afọ 2 gara aga
Uche ha mere ka ha ghara ịnakwere ntụziaka ndị amamihe na ịgọnarị Toshav'a ruo n'ókè ụfọdụ [amachaghị nke ọma kpọmkwem ihe dị ebe ahụ]
Ọ́ bụghị ụkpụrụ nke na-eduzi ha bụ ụkpụrụ na-eduzi gị?
Ndụmọdụ ndị Farisii banyere ndị Sadusii ọ̀ bụ n'ezie ihie ụzọ ọzọ amamihe dị na ya maka nghọta gị?
Na ihe mere e ji dinara gị n'ike na Talmud [n'ihi ihe ụfọdụ, nke m na-enweghị ike iguzo ugbu a]
Kedu ihe kpatara ọgụgụ isi na-agwa anyị na ọ dịghị nsogbu ịgbanye ikuku ikuku na Satọde, ma ọ bụ mmiri esi mmiri maka kọfị
N'ịtụgharị n'ihu Talmud na ndị na-ekpe ikpe, enwere m mmetụta ụdị "oké ifufe" na ihe bụ ee na ihe na-abụghị, na gịnị kpatara ọdịiche ahụ.
Enwere m olileanya na m kọwara onwe m, n'ihi na ihere na-eme m n'ezie maka ihe m kpughere na isiokwu gị
Ọ bụrụ na ụkpụrụ nke duziri ha bụ ihe na-eduzi m mgbe ahụ abụ m Sadusii na Beitusi. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ akọwapụtara, biko chepụta ya ebe a ma kparịta ya n'uju.
Ndewo Josef Zara 2 afọ gara aga
Asịghị m na ị bụ Sadusii,
1. M kwuru na ruo taa, ọ ga-adị m ka ụzọ dị otú ahụ bụ ụzọ Sadusii, enweghị nnabata nke echiche / iwu / ikike nke ndị na-eme omume nke Torah na-agafe site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ na-enweghị ihe akaebe ọ bụla [ ụdị ihe Hillel gwara Ger onye chọrọ ịmụ Ime Anwansi]
2. Ọ dị m ka ị bụ Ọtọdọks n'echiche halak, na ihe ndị ọzọ
Na otú anyị nwere ike bee na nkọ mma ihe na-anabata na omenala na ihe na-adịghị
N'ime nkenke, otú i si ebipụ ikike mbụ n'ihe odide Masoret, otú ahụ ka ndị Sadusii kpụpụrụ ndị Farisii n'ihe odide Masoret.
Oleekwa otú anyị si mara na ndị Farisii kwuru eziokwu?
Ànyị nwere ihe àmà nke ezi omume nke ndị Farisii ka ànyị na-agba chaa chaa?
ק Zara 2 afọ gara aga
Kamilta Debdihuta kwesịrị dezie ntinye Wikipedia gị wee kwuo na ị na-agba akaebe na ị nwere ike ịbụ Sadusii na Beitusi.
A.P. onye na-arụrịta ụka n'oge ahụ ya na otu onye rabaị banyere Rabbi Shlita, echere m na ọ rụrụ m ụka na ọ bụrụhaala na ị na-ekwu na ọ dịghị ikike n'ihe gbasara echiche maka usoro ọmụmụ nke ọgbọ, mgbe ahụ ọ bụrụgodị na ị ruru ihe niile. ụkpụrụ iri na atọ n'onwe gị ọ nweghị ihe dị na ya. N'ihi na akụkụ dị ukwuu nke echiche nke ụkpụrụ iri na atọ bụ omenala. Ma ghọta na ndị ọzọ amachaghị m karịa…
Anaghị m ekwu okwu ma ọlị ma ọ bụ ọdịnala ma ọ bụ onye rabaị, anaghị m arụsi ọrụ ike inye akara ule, ana m arụ ọrụ na nkọwa.
M na-agbalị ịghọta ihe dị iche [ma ọ bụrụ na ọ dị] n’etiti ụzọ o si eme ya na ụzọ ndị Sadusii [na-esighị ike nke ihe ọmụma m nwere banyere ha ma ọlị]
Ọ bụ ihe na-enweta eziokwu na akụkụ nke nnyefe nke Torah ruo ọgbọ dị iche iche n'etiti moralists nke Torah [na anyị na-adịghị emeso ndị ọkà mmụta sayensị eziokwu n'ezie] na-amanye m, ma ọ bụ, e nwere ndị dị otú ahụ a "formal" ikike kere. ndị na-eme iwu Tora n’ọgbọ niile
M na-eche otú m ga-esi nabata ọbụna Torah e dere ede, ebe ọ bụ na ọ bụkwa ndị m na-anabataghị ikike ha nyere ya
Asịghị m na ị sịrị na m bụ onye Sadusii. Ihe m kwuru bụ na arụmụka banyere ma m̀ bụ onye Sadusii ma ọ bụ na m abụghị nke m adịghị mkpa. Ajụjụ bụ ihe ziri ezi na ọ bụghị ihe aha kwesịrị.
Ihe e zitere na ozi sitere na Saịnaị ma ọ bụ ụlọ ọrụ tozuru etozu (Sanhedrin) bara uru, ihe ọ bụla ọzọ ọ bụrụgodị na e zighị ya n’omenala abaghị uru. Dị mfe. Ọ naghị adị mfe mgbe niile ihe sitere na Saịnaị ma ọ bụ ụlọ ọrụ tozuru etozu na ihe na-emeghị, mana ọ bụ mkparịta ụka dị mkpa ka e mee n'okwu nke ọ bụla n'ihi uru nke aka ya.
N'ezie, ọ dịghị ikike maka ihe e kere site n'ọdịnala nke ọgbọ. O doro anya na ọ bụghị. O nwere ụfọdụ ibu, e nwekwara iwu omenala. ọ bụ ya. Naanị Chineke ma ọ bụ ụlọ ọrụ tozuru oke nwere ikike. Site n'ụzọ, nke a abụghị ihe ọhụrụ m. Nke a bụ iwu ọtụtụ ndị na-ekpe ikpe kwenyere. Ma mgbe ụfọdụ, ha na-achọkarị ileghara ya anya.
Gị na K. (nakwa onye rabaị o hotara) aghọtaghị ihe m kwuru. Esemokwu m bụ na n'echiche, enweghị ikike n'ihe gbasara eziokwu. Banyere eziokwu, na ọ baghị uru ma sayensị ma ọ bụ na ọ bụghị (ọbụlagodi ọbịbịa nke Mesaịa ahụ ma ọ bụ onye na-enye onwe ya bụ eziokwu) ihe ga-ekwe omume bụ ime ka m kwenye na nke a bụ eziokwu ma ghara ịzọrọ megide m ikike a nwapụtara. N'ihi na ọ bụrụ na ekwetaghị m, gịnị ka ọ ga-abara m ma a gwa m na ọnọdụ dị otú ahụ bụ ịjụ okwukwe?! ọ bụ ya. Dị mfe ma doo anya, na onye ọ bụla nke na-ekwenyeghị na nke ahụ na-enwe mgbagwoju anya.
Ọ dị m ka m ghọtara nke a nke ọma, yabụ m jụrụ
M ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu, otú e n'ihu gị ọbụna otu ọnụ ọgụgụ na ị ga-esi dị ka ezi? Dịka ọmụmaatụ usoro ekpere
Ị naghị adabere na ndị na-enweghị ikike?
Michi Zara 2 afọ gara aga
Ekwuru m ihe bụ eziokwu. Enwere mkparịta ụka nke ndị ntị chiri ebe a
Mgbe ị na-ekwu eziokwu, ị pụtara ihe akaebe?
Ya bụ, ị na-anabata ihe a na-enye dị ka akaebe, ma ị naghị anabata ihe e nyere dị ka "echiche nke onwe"?
Otú ahụ ka m ghọtara na agbanyeghị
Ebe a na-emekwa m ihere
Okwuchukwu nile nke ndị amamihe sitere n’amaokwu ndị ahụ abụghị ihe akaebe kama “echiche nke onwe,” dịka o siri dị.
Ma ọ bụrụ na a na-ekwu na Chazal bụ ikike, ọ bụ Manlan, ọ bụghị echiche onwe onye nke ndị na-eme omume nke Torah site na mgbe ahụ ruo taa?
M na-atụ aro ka anyị kwụsị ebe a. Ị na-eme ka ọ sie ike mgbe ị na-amaghị ihe ọ bụ.
Ọ bụrụ na o nwere ihe m dere kpọmkwem ma ọ dị gị ka ị ghọtaghị ya, biko dee ya nke ọma (gụnyere isi mmalite) anyị nwere ike ikwurịta. M na-ajụ na-enweghị nkwupụta n'ozuzu banyere usoro m na o doro anya na ị maghị ya.